Goolhaaye Alisson Becker oo fariin digniin ah ee ku aadan Premier Leagueu diray saaxiibadiis kooxda Liverpool – Gool FM
Goolhaaye Alisson Becker oo fariin digniin ah ee ku aadan Premier Leagueu diray saaxiibadiis kooxda Liverpool
(Liverpool) 10 Feb 2019. Goolhaayaha kooxda Liverpool ee reer Brazil ee Alisson Becker ayaa ka hadlay xaalada haatan ee kooxdiisa Reds ee horyaalka Premier League iyo loolanka ay ugu jirto inay ku guuleysato xili ciyaareedkan.
Kooxda Liverpool ayaa 3-0 ku garaacday kooxda Bournemouth ciyaar ka tirsaneyd kulamada 26-aad ee horyaalka Premier League kaasoo ka dhacay garoonka Anfield.
Hadaba Alisson Becker ayaa fariin u diray saaxiibadiis kooxda Liverpool, wuxuuna kaga digay inay sameeyaan khaladaad dili kara xili ciyaareedkooda oo dhan, isla markaana seejin kara riyadooda kaga aadan inay ku guuleystaan horyaalka Premier League.
“Xilligan la joogo daganaanshaha waa waajib, waxayn muhiim u tahay qof waliba, diirad saarida iyo in la ogaado khalad kasta ee halis nagu noqon kara sidoo kale waa muhiim, kulan kasta wuxuu inoo yahay muhiim”
“Kooxaha Premier League dhamaantood dhibaatooyin ayay u geysteen kooxaha kale, Bournemouth ayaa 4-0 ku garaacday Chelsea, sidaas darteed horyaalkan waa mid adag”.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Sassuolo vs Juventus
Labo ka tirsan taageerayaasha Southampton oo la xiray kaddib markii ay ku jees jeeseen xidiggii diyaaraddu la dhacday ee Sala